Semalt Expert: torohevitra momba ny votoatin'ny Visual
Amin'izao andro izao, sary vetaveta dia mety hahatonga hafatra iray mendrika ho an'arivony. Sarotra takarina ny sary, mamoaka votoaty manaiky ny hevitra fototra amin'ny fomba fijery iray. Na izany aza, sarotra ny fisafidianana sary.
Google dia nanambara ny fanavaozana vaovao azy ireo tamin'ny volana Janoary 2017. Ho toy ny fanavaozana, ny votoatin'ny lahatsary, ary ny votoaty hafa dia ahafahan'ny SERP ho toy ny salan'isa voasoratra an-tsoratra. Noho izany, mihira sary samihafa ao amin'ny pejin-tsarimihetsika dia hamorona tranokala vohikala amin'ny fangatahana fikarohana organika - lierac gel contour des yeux. Vokatr'izany, maro ireo orinasa mampiasa io fomba fiasa io mba hahazoana vola an-tapitrisany amin'ny fomba ara-barotra an-tserasera.
Andrew Dyhan, Manager Success Manager Semalt dia mamaritra tsiambaratelo sasany amin'ny famoronana votoaty goavana ho an'ny tranonkalanao.
1. Aza mampiasa sary misy tahiry
Sarin-tsarimihetsika sarotra ho an'ny tarika amin'ny tranonkala. Ny fahazoana sary tsara tarehy avy amin'ny mpaka sary dia mety hahatonga ny UX tranonkalanao hikapoka ny endriky ny mpifaninana aminao. Ankoatr'izay, ireo sarin-teny miaraka amin'ny antitra fahiny koa dia miompana amin'ny SERPs, izay mahatonga ny vokatra manontolo mahasoa anao. Tena zava-dehibe ny miala amin'ny sary. Ny sary nalaina dia tsy manizingizina ny fahefana marika noho izany ny habaka dia very ny maha-izy azy. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny teti-dratsiny sy ny loko dia tsy mifanaraka amin'ny fametrahana ny tranokalanao..Io fahasarotana io dia mahatonga ny sarin'ny sarimihetsika ho fahaverezana amin'ny fomba fisehon'ny tranonkala iray. Ny famoronana sary vaovao dia mety ho fomba mahomby hanitsiana ity olana ity.
2. Ny votoaty hita maso dia afaka manatsara ny fahaiza-mamorona
Raha mbola mitohy ny aterineto, mbola mivoatra hatrany ny votoaty. Sary maro no lasa miely loatra ka tsy tokony hiseho any amin'ny pejin'ny tranonkala. Ny sary tsy tokony hipoitra amin'ny tranonkala hafa koa. Ity fahatsiarovan-tena ity dia singa iray amin'ny maha-azo itokiana izay ahafahan'ny vohikala manatontosa toerana iray manan-kery eo amin'ny sehatra iray. Ankoatr'izay, ny fahaiza-mamorona dia afaka mitondra endrika votoaty isan-karazany mba hampisehoana ireo zavatra samihafa. Ohatra, ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana dia tonga tamin'ny fanoharana 3D momba ny anatomia olombelona
3.Aoka ny sary izay "hampitombo ny tantaranao"
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana misarika ny sain'ny mpihaino dia ny fampiasana teknika fitantarana. Amin'ny alalan'ity fomba ity, dia afaka misarika ny sain'ny mpihaino ianao ary mampiditra azy ireo amin'ny votoatiny. Ity karazana habaka fampiasa amin'ny tranonkala ity dia manentana ny fandrisihana amin'ny Google ka mahatonga azy ireo handefa tombony ho an'ny mpifaninana amin'ny tranonkalan'ny mpifaninana. Ny famaritana tantara no tena fototry ny fananganana fanamafisana ny votoaty an-tserasera. Ankoatr'izay, ny tantara dia mamorona singa iray amin'ny fankatoavana sy ny fanintona. Ny mpividy dia afaka mifantoka lozam-pifamoivoizana amin'ny alalan'ny fampiasana tantara mifandraika amin'ny fomba fiainan'ny niche. Ohatra, ny tranonkala bible na ny filazantsara dia afaka hanaraka ireo sary mampiaiky ao amin'ity fizarana ity.
Ny votoaty hita maso dia vao haingana no iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hahazoana ny laharana ambony amin'ny pejy SERP. Tranonkala marobe no nahomby tamin'ny alalan'ity fomba ity tamin'ny tranonkalan'ny e-varotra. Na dia izany aza, ny votoaty hita maso ao amin'ny tranonkalanao dia mety ho asa manelingelina ary matetika dia tsy mahavita izany ny olona maro. Ampiasao ity torolàlana ity, omen'ny Services Semalt Digital mba hanatsarana ny votoatiny hita maso mba hahatonga ny tsara indrindra amin'ny paikady amin'ny aterineto.